· 8 months ago ·38 Comments
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး (၃) ဦး ကျမ်းသစ္စာ ကျိန်ဆိုခြင်းအခမ်းအနား
ဇွန်လ ၅ ရက် ၂၀၂၁ ခုနှစ်
Like – 26K Share – 3398
2021-06-05 at 8:06 PM
Christine Aung says:
Welcome Ministers, may bear down all difficulties.
May Khaing Latt says:
2021-06-05 at 8:13 PM
CRPH က ခန့်အပ်လိုက်သော ဝန်ကြီးများကို ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာထောက်ခံကြိုဆိုပါသည်❤️
ခက်ခဲနေတဲ့ကာလမှာ အန္တရာယ်ကြားကနေ တာဝန်ယူပေးလို့ ကျေးဇူးလဲတင်ပါတယ်။
ဆရာတို့အားလုံး ဘေးကင်းကျန်းမာပြီး လိုရာပန်းတိုင် အရောက် လှမ်းနိုင်ကြပါစေ။ ❤
2021-06-05 at 8:19 PM
I want to know the biography of U Thein Oo appointed as ministry of law. We don’t have any reasons to support him asaminister without getting his personal facts.
February Lwin says:
2021-06-05 at 8:21 PM
We support CRPH and NUG. 👏👏👏👏
2021-06-05 at 8:22 PM
ကြိုဆိုပါ၏ ထောက်ခံပါတယ် လေးစားပါတယ် အရေးတော်ပုံ အောင်ရမည်
2021-06-05 at 8:23 PM
we support CRPH ‘NUG&PDF
Welcome our new Ministers
2021-06-05 at 8:36 PM
Thank you so much. We support National Unity Government (NUG) .
2021-06-05 at 8:39 PM
2021-06-05 at 8:40 PM
CRPH က ခန့်အပ်လိုက်သော NUG အစိုးရ ဝန်ကြီးများကို ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာထောက်ခံကြိုဆိုပါသည်❤️
2021-06-05 at 8:41 PM
အနာဂတ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တရားဝင် အစိုးရအား ပြည်သူအားလုံး ထောက်ခံပါတယ် ….
2021-06-05 at 8:42 PM
2021-06-05 at 8:46 PM
We support National Govement
Mg Hein says:
2021-06-05 at 8:55 PM
ပြည်သူတစ်ယောက်အနေဖြင့် ဝမ်းသာစွာ ကြိုဆိုပါ၏
2021-06-05 at 8:57 PM
CRPH နဲ့ NUG ကိုယ် အပြည့်အဝထောက်ခံပါသည် 100%
2021-06-05 at 9:01 PM
We support NUG & CRPH&PDF
2021-06-05 at 9:02 PM
Tandar Tandar says:
2021-06-05 at 9:04 PM
Daw Khinmama says:
2021-06-05 at 9:12 PM
Moe Hein Thu says:
စစ်ပွဲတစ်ခုမှာ ထောက်လှမ်းရေးသည်လည်း အရေးကြီးတဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမှာ ပါဝင်တယ်
အရေးကြုံလာလျှင် ပြည်သူများအားလုံးထောက်လှမ်းရေးတာဝန်များယူစေချင်ပါသည်။ထောက်လှမ်းရေးဆိုတာ ကြိုတင်သိရှိခြင်းဘဲဖြစ်ပါတယ် ကြိုတင်သိရှိခြင်းကြောင့် ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများလုပ်​နိုင်သည်။ မည်သို့ပင်အင်အားကြီးစေကာမှု လက်ဦးမှုအရယူ၍ အရင်းနည်းနည်းဖြင့် အောင်ပွဲဆင်နိုင်ခြင်းဘဲဖစ်ပါတယ် ပြည်သူလူထုအတွင်းမှ ထောက်လှမ်းရေးသမားများရဲ့တာဝန်က အချိန်နှင့်တပြေးညီ စကစအဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ လှုပ်ရှားမှုများ/အင်အားများ/တပ်စွဲမှု/တပ်ဖြန့်မှုများ/စစ်ကူလမ်းကြောင်းများ/ရိက္ခာလမ်းကြောင်းများပေးပို့ခြင်း သတင်းတိတိကျကျကို ထောက်လှမ်းချက်တည်ဆောက်၍ နီးစပ်ရာPDFများထံ ပေးပို့ခြင်းဖြင့် ကူညီပါ။ #မှတ်ချက် တိကျသော သတင်းရရှိပါက အင်တာနက်ပေါ်(လုံးဝ လုံးဝ)မတင်ပါနဲ့ တင်လိုက်ခြင်းအားဖြင့် လမ်းကြောင်းများပြောင်းလည်းသွားနိုင်ပါတယ်
ထောက်လှမ်ရေးသမားများအတွက် စောင့်စည်းရမဲ့အချက်ကတော့ နှုတ်စောင့်စည်းခြင်း/အရေးသားမှတ်စုစောင့်စည်းခြင်း/လူစည်ကားသောနေရာများတွင် မိမိအားမရိပ်မိစေရန် နေထိုင်တတ်ခြင်း/နေရာဒေသအလိုက် ပုံဖျက်တတ်ခြင်း
မတူကွဲပြား​သော အမြင်များကို အပြုသ​ဘောဖြင့် နားလည်မူ့​ပေးစွမ်းနိုင်​သော လူ့တန်ဘိုး လူ့ဂုဏ်သိက္ခာလို့ မြင်ကြရင် လူပီသပြီ​ပေါ့။
2021-06-05 at 10:27 PM
Pls note Burmese guys afraid white. Even singer Bo Phyu with US military uniform, all they will run like hell. I mean Khway Pyay Wet Pyay.😁
Aayee Khine says:
2021-06-05 at 11:57 PM
CRPH & NUG အစိုးရကို အပြည့်အဝ​ထောက်ခံပါသည်။
2021-06-06 at 2:00 AM
CRPH က ခန႔္အပ္လိုက္ေသာ NUG အစိုးရ ဝန္ႀကီးမ်ားကို ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာေထာက္ခံႀကိဳဆိုပါသည္❤️
ခက္ခဲေနတဲ့ကာလမွာ အႏၲရာယ္ၾကားကေန တာဝန္ယူေပးလို့ ေက်းဇူးလဲတင္ပါတယ္။
ဆရာတို့အားလုံး ေဘးကင္းက်န္းမာၿပီး လိုရာပန္းတိုင္ အေရာက္ လွမ္းနိုင္ၾကပါေစ။ ❤
2021-06-06 at 6:53 AM
2021-06-06 at 9:16 AM
မင်းတို့ရဲ့ ရာထူးကိက်စတွေ နောက်ပြီး နိုင်ငံတကာလှည့်ပြီး အခုဘာတွေတိုးတက်လာလည်း ဘာတွေပြောင်းလဲလာလည်း
နေ့စ၌နေ့တိုင်း သေတဲ့လူနဲ့ အဖမ်းခံရတဲ့လူနဲ ္PDF. ဘယ်သူ့ကိုကာကွယ်တာလဲမင်းတို့ဘဲခက်ခဲတယ်လို့မထင်နဲ့ အားလုံးဟာဒီလိုကြီးဘဲ မင်းတိုတော်လှန်ရေးစနိုင်ရင်လဲစ. မစနိုင်ရင်လဲ ငါတို့ပြည်သူတွေအဆမတန်သေပြီးမှ စစ်မဖြစ်စေချင်ဘူး
Ayeaye Lwin says:
2021-06-06 at 12:38 PM
Kyaw Zin Aung says:
2021-06-06 at 12:41 PM
ပါစပ်ကတော့ လီးလီးလားလားတွေပြေားတက်တယ် အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်တဲ့ comment ကိုတောင် copyကူးတယ် အချောင်နေအချောင်စားတွေထောက်ခံတဲ့ အစိုးရကလည်း လေပေါ်အစိုးရ ဒါတောင် စကစ အစိုးရက အင်တာနက်ဖျက်လိုက်ရင် $ရူး လုံးလုံးဖြစ်တယ်😡
LX Kafle says:
2021-06-07 at 11:26 AM
Congratulations we support NUG government thank you so much for all
2021-06-07 at 8:21 PM
Thida Swe says:
2021-06-08 at 1:45 PM
Congratulations NUG’s Ministers!